Christian Pulisic, Michy Batshuayi iyo Davide Zappacosta oo ugu waa weyn maanta wararka suuqa kala iibsiga ee Kooxda Chelsea – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee Kooxaha Juventus iyo Lyon oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League ee Kooxaha Manchester City iyo Real Madrid oo la shaaciyay
RASMI: Liiska musharixiinta Abaalmarinta Xiddiga ugu Fiican Premier League oo la shaaciyay
RASMI: Liiska musharixiinta Abaalmarinta Tababaraha ugu Fiican Premier League oo lagu dhawaaqay
Maurizio Sarri oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa Juventus ee ka qeyb galaya kulanka Lyon
Arsenal oo loo sheegay inay bixiso lacagta lagu burburin karo qandaraaska xiddiga Kooxda Atletico Madrid ee Thomas Partey
Isku aadka wareegga siddeed dhammaadka tartanka Europa League oo dhammaystirmay & Goorta la ciyaari doono oo la shaaciyey
Horudhac: Manchester City vs Real Madrid: Shaxda ay ku soo geli karaan, Xaqiiqooyinka & Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka soo laabashada laga sugayo Los Blancos
Juventus vs Lyon: Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa soo laabashada laga sugayo Kooxda Bianconeri
Maurizio Sarri oo ka hadlay suurtagalnimada ah in laga ceyriyo tababarka kooxda Juventus
Christian Pulisic, Michy Batshuayi iyo Davide Zappacosta oo ugu waa weyn maanta wararka suuqa kala iibsiga ee Kooxda Chelsea
Haaruun August 21, 2019
(London) 21 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa filanaysa inay sameyso wax ka wanaagsan wixii ay soo qabatay xilli ciyaareedkii hore.
Macallin Maurizio Sarri oo Chelsea u qaaday koobka Europa League, isla markaana masuul ka ahaa inay ku dhammaystaan kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League ayaa ka tagay kooxda.
Sidoo kale Blues waxa ay lumisay xiddigoodii sare ee xulka qaranka Belgium Eden Hazard, kaasoo ku biiray Real Madrid xagaagan.
Kooxda waxaa hoggaankeeda la wareegay Tababare Frank Lampard, balse weli waxa uu ku dhibtoonayaa inuu gaaro guushiisii ugu horreysay ee kooxda reer London horyaalka Premier league.
Haddaba warbixinnadii dhanka suuqa kala iisbiga xiddigaha ee kooxda Chelsea kuwaasoo ugu weynaa maanta oo Arbaco ah waxaa soo bandhigtay shabakadda Sports Mole.
Chelsea Davide Zappacosta u ogolaanaysa inuu amaah ku aado kooxda Roma:-
>- Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay ku faraxsan tahay inay Davide Zappacosta u ogolaato inuu amaah ku aado naadiga horyaalka Serie A ka dheesha ee AS Roma.
Michy Batshuayi oo doonaya inuu sii joogo oo uu u dagaallamo booskiisa kooxda Chelsea xilli ciyaareedkan:-
>- Weeraryahan Michy Batshuayi ayaa la soo sheegayaa inuu doonayo inuu sii joogo oo uu u tartamo booskiisa safka koowaad tababare Frank Lampard ee kooxda Chelsea kaddib markii xilli ciyaareedyadii dhowaa uu amaah ku qarash-gareeyey.
Christian Pulisic oo iska diiday u dhaqaaqista kooxda Manchester United sabab la xiriirta Macallin Jose Mourinho.
Christian Pulisic ayaa la soo warinayaa inuu u dhaqaaqay Chelsea halkii uu aadi lahaa kooxda Manchester United, maxaa yeelay Aabihiisa ayaan jeclayn macallin Jose Mourinho… Guji halkaan si aad u aqrisato warbixintaan oo dhammaystiran.
Claudio Bravo, Jadon Sancho, Eduardo Camavinga oo ugu waa weyn maanta wararka suuqa kala iibsiga ee kooxda Man City
“Messi ayaa ka dambeeyay bixitaankii Philippe Coutinho”
Muxuu ka yiri Sergio Busquets kulanka ay habeen dambe wajahayaan kooxda Napoli?